Cây hoa ly | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cây hoa ly | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cây hoa ly | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Igama lesiNgesi/igama leNzululwazi: Lilium Longiflorum
Amanye amagama: Intyatyambo yenyibiba, intyatyambo yenyibiba
Igama lenzululwazi: Lilium Longiflorum
Usapho: Amatswele (Liliaceae)
1 1. Iimpawu zeBotanical zezityalo zenyibiba
2 2. Ubume besityalo senyibiba
3 3. Inqanaba lokukhula kunye nophuhliso
4 4. Iimfuno zeemeko zendalo zezityalo zenyibiba
4.1 4.1. Ubushushu
4.2 4.2. Ukukhanya
4.3 4.3. Ukufuma
4.4 4.4. Umoya
5 5. Imvelaphi kunye nentsingiselo yenyibiba
5.1 5.1. Imvelaphi yenyibiba
5.2 5.2. Intsingiselo yenyibiba
1. Iimpawu zeBotanical zezityalo zenyibiba
– Isiqu sentyatyambo yenyibiba:
+ Isikali somzimba yinxalenye eyandisiweyo yomzimba equka ipleyiti yomzimba kunye nezikali zomzimba. Izikali zomzimba zingenanto ngaphandle kwesingxobo; Izikali zineemilo ezininzi ezi-elliptical, spherical, ovoid shapes.
+ Umzimba weglasi uthathwa njengentsholongwane enesondlo; umzimba omdala oquka i-scaly disc, isikali esidala, isikali esincinci, i-primary stem axis, i-secondary stem axis kunye ne-apex yokukhula.
+ Ubungakanani bomzimba wesikali buqhele ukulinganiswa ngobungakanani bomzimba kunye nobunzima bawo. Ubungakanani kunye nomzimba wezikali ziyahluka ngokuxhomekeka kwiindidi, uhlobo oluncinci luyi-6cm ububanzi, ubunzima be-7-8g, enkulu yi-24-25cm ububanzi, ubunzima be-100g.
Isityalo senyibiba sineentlobo ezimbini zeengcambu, ingcambu kunye nesiqu:
+ Ingcambu yingcambu esezantsi, ekhula ukusuka kwisiseko somzimba we-scaly, kunye namasebe amaninzi, ukukhula okuqinileyo, lelona lungu liphambili lokufunxa amanzi kunye nezondlo zesityalo, ubude bobomi bale ngcambu bufikelela kwiminyaka emi-2.
+ Iingcambu zesiqu ziingcambu eziphezulu ezikhula kwisiqu esiphantsi komhlaba, ezinoxanduva lokuxhasa isiqu, ukufunxa amanzi kunye nezondlo, ixesha lokuphila kwale ngcambu ngunyaka omnye.
– Isiqu senyibiba:
+ I-axis ye-stem ye-Lily, iiLilies zenziwe ngenxa yokufinyezwa kwentsholongwane yesondlo. I-shaft yomzimba yohlulwe kwi-shaft yomzimba oyintloko kunye ne-shaft yomzimba wesibini.
+ Emva kokuntshula, i-axis ephambili kwi-axillary sprout kukwandiswa kokuqala, ihlumela le-apical lifinyeza, likhuphukele emhlabeni, amagqabi aphezulu aqala ukuvuleka, xa isityalo sikhula, inani lamagqabi limisiwe.
+ Ukuphakama kwezityalo kunqunywe ngamanani amagqabi kunye nobude obuvuthayo, inani lamagqabi liphenjelelwa ngumgangatho wee-bulbs, iimeko zangaphandle kunye nexesha lonyango olubandayo lweebhubhu.
+ Ngokuqhelekileyo iinyibiba, izityalo zenyibiba zinenani lamagqabi amagqabi amisiweyo phambi kokutyala, ngoko ke ukuphakama kwesityalo kusamiselwa ikakhulu bubude obutshayo.
– Amagqabi enyibiba:
+ Iinyibiba neenyibiba zinamagqabi amaninzi athe saa kwisangqa esibanzi.
+ Zininzi iimilo ezahlukeneyo: irhombus ende, ukumila kwenaliti, imilo e-oblong eqhelekileyo, igqabi elithe tye, incam yegqabi ethe ngqo, akukho petiole okanye petiole emfutshane.
+ Ububanzi ukusuka kwi-1.8 – 2.8cm, ubude ukusuka kwi-9 – 12cm, amagqabi athambileyo, acwebezelayo, aluhlaza okhanyayo.
Inani lamagqabi lidla ngokuhluka ukusuka kwi-50 ukuya kwi-150 amagqabi, kuxhomekeke kwiindidi.
Iimpawu zeentyatyambo kunye namagqabi ezityalo ze-lily
– Iingcambu kunye nembewu
+ Izityalo ze-Lily kunye neenyibiba zineebhubhu ezininzi kufuphi ne-rhizome, i-tuber nganye isuka kwi-0.5 ukuya kwi-3cm kwi-circumference, inani leebhubhu lixhomekeke kwiindidi kunye neemeko zokukhula.
– Intyatyambo Lily
+ Iintyatyambo zeenyibiba zikhula zodwa, okanye zilungelelaniswe kwi-axis yeentyatyambo, i-flower corolla imile njengegqabi, incinci. Iintyatyambo zijonge ezantsi, zithe tye okanye phezulu.
Imilo yeentyatyambo sesona siseko siphambili sokuhlela:
Iimpawu zeenyibiba kunye neepistils zeenyibiba
Umzekelo: Uhlobo lwexilongo, i-1/3 yangaphambili igobile; uhlobo lwefunnel ngaphambili 1/3 egobileyo ngasemva ngaphandle; Umphambili omile okwekomityi ugobe kancinane.
Izandisi-lizwi zikholisa ukutyekela kancinci, zenza inqwelomoya ethe tye malunga nama-45 – 60º. Iintyatyambo zimile okwesithethi, ezimhlophe, ububanzi bepetali ukusuka kwi-5-7cm, ubude bepetali ukusuka kwi-13-16cm, intyatyambo ububanzi ukusuka kwi-10-12cm, iipetali ezigobile kancinci.
+ Ubume bentyatyambo: Iziqwenga ezi-6 ezimile okwe perianth ezinestamens ezi-6, i-anther etyheli, i-ovary ende, icylindrical ovary, i-3-lobed pistil, ipetal mfutshane kunoshafti, iasi yeentyatyambo encinci, intloko eyandisiweyo enenotshi ezi-3 zegumbi ngaphezulu.
+ Umbala weentyatyambo utyebe kakhulu: umhlophe, isitulo esipinki, obomvu, tyheli, umthubi orenji, isuphu emthubi, emfusa ebomvu.
+ Iintyatyambo zinevumba elimnandi, iintyatyambo ezisikiweyo zinokuqina malunga neentsuku ezi-6 ukuya kwezili-10.
– Isiqhamo somthi weenyibiba
+ I-Lily, i-lily fruit yi-capsule, imilo engqukuva ende, inamacandelo ama-3, ubude besiqhamo ukusuka kwi-8 ukuya kwi-10 cm, isiqhamo ngasinye sinamakhulu amaninzi embewu.
+ Imbewu ithe tyaba, ijikelezwe ngamaphiko acekethekileyo, i-hemispherical, okanye iikona ezi-3, ubude beekona.
+ Ububanzi bembewu 15 – 22mm, igram e-1 yembewu inembewu emalunga nama-700 – 800. Kwiimeko ezibandayo ezomileyo, imbewu ingagcinwa iminyaka emi-3.
2. Ubume besityalo senyibiba
– Iinyibiba zinokukhuliswa egadini, ezimbizeni okanye kwiivazi kwaye kungakhathaliseki ukuba ziphi na, iinyibiba zisenkulu. Isiqu senyibiba sityebile, siluhlaza kwaye siqinile. Ecaleni kwesiqu, amagqabi akhula ngokungqindilili ngokwamaleko achaseneyo. Amagqabi ambhoxo, ajongiswe kwincam enemithambo entle etshoneyo. Ezona zintle ziinyibiba, enoba zisengamathupha, xa zidubula okanye xa zidumbile, iintyatyambo zikhangeleka zinomtsalane kakhulu. Iinyibiba zinemibala emininzi: epinki, emthubi, ebomvu, maxa wambi epinki exutywe namhlophe… kodwa eyona nto ndiyithandayo yinyibiba epinki.
– Amagqabi makhulu kwaye athambe, agobe ngasemva kancinci. Embindini weepetali kukho i-longitudinal slit kwaye kukho amachaphaza amnyama ngaphakathi. Umthi oneentyantyambo ezininzi kunye namathupha. Intyatyambo iyaqhakaza kwaye iyabuna, kwaye kukho enye intyatyambo elandelayo, ngoko inyibiba inokudlala ixesha elide. Ngokukodwa kwiholide yaseTet, abantu abaninzi bathanda iinyibiba kungekuphela nje kuba zintle kodwa zinuka kamnandi.
3. Inqanaba lokukhula kunye nophuhliso
– Phuhlisa i-axis ye-stem, ihlumela, intyatyambo, i-seed seed, fa. Iibhalbhu zingcwatyelwa emhlabeni emva kweentsuku ezingama-60-70 zokuntshula. Ukuba iibhalbhu ziphathwa ngokubanda (isidlo sakusasa), kuthatha iiveki ezimbini kuphela xa zityalwe emhlabeni de ihlumelo liphume emhlabeni. Unyango olubandayo alulungile, ixesha lokuhlwayela kunye nokubanda linokuhlala ukuya kwiiveki ezi-5. Ukususela ekuhlumeni ukuya kwihluma malunga neentsuku ezingama-60-75 ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, ukusuka kwihlumela ukuya kwiintyatyambo ukusuka kwiintsuku ezingama-25-35, ukusuka kwintyatyambo ukuya kwisiqhamo ukusuka kwiintsuku ezisi-8-12.
Ukwahlula kweentyatyambo: Njengesityalo sosuku olude, xa ixesha lokukhanya likhula, inkqubo yokwahlukana kweentyatyambo yenziwa. Iibhubhu ziphathwa ngokubanda kwi-5oC ukusuka kwiiveki ezi-3-5, malunga neentsuku ezi-8-13 emva kokutyala, iincopho ezihlumayo ziba mfutshane, kwaye iintyatyambo zamandulo ziqalisile ukumila. Nganye kwezi ntyatyambo zamandulo zikhatshwa 1-2 yezinye ihlumelo. Xa i-tubers iphathwe ngokubanda, inokuhluma kwaye ihlukanise iintyatyambo phambi kokutyala. Ngoko ke, ukuba ayityalwanga ngexesha, iya kuba yingozi ekukhuleni kweentyatyambo. Inani leentyatyambo zamandulo liphenjelelwa kakhulu ziimeko zokukhula kwesityalo sangaphambili kunye nomgangatho weebhalbhu.
Iintyatyambo: Ukwahluka kweentyatyambo kunye nenani leentyatyambo liphenjelelwa kakhulu ziimeko zokukhula, kodwa izinga lokukhula kweentyatyambo kunye neentyatyambo liphenjelelwa kakhulu ziimeko zasemva kokutyala. Inkunzi kunye nemazi stamens ze Lilium formolongo ezisithoba ngaxeshanye. Kwiintsuku ezi-8-12 emva kokuchumisa, igumbi liqala ukuvuvukala. Ukukhanya okunamandla kubangela ubunyumba bamathupha, kwaye kwakhona kubangela ukutsha kwamagqabi, unyango lwe-shading luya kunciphisa ukucutheka kwehlumela. Ngokwahlukileyo, ukukhanya okuphantsi (ingakumbi ebusika) kubangela ukuba i-bud iyancipha, ichaphazela umgangatho weentyatyambo.
+ Iziqhamo ezivuthiweyo: Emva kokutyatyamba malunga neenyanga ezi-2. Xa isiqhamo sityheli, siyakuhlukana sibe yimbewu enamaphiko enokuthi isasazwe emoyeni. Emva kokuvuna iintyatyambo (okanye iziqhamo) amagqabi abunileyo kunye neziqu, iiglowubhu ngoku zinokuvunwa ukuze kuhlwayelwe.
4. Iimfuno zeemeko zendalo zezityalo zenyibiba
– ILily sisityalo esikwaziyo ukumelana nengqele, ayibunyamezeli kakuhle ubushushu, ithanda imozulu epholileyo nefumileyo.Ubushushu obufanelekileyo emini ngu 20-25 degrees celcius, ebusuku yi 12-15 degrees celcius.Imihlanganiselwa yaseMpuma ilungele ukuqala kwexesha. .ngamaqondo obushushu emini angama 25-28 degrees celcius, ebusuku abe 18-20 degrees celcius, ngaphantsi kwe 120 degrees celcius, izityalo zikhula kakubi, iintyatyambo zimfamekiswa lula. Ukusuka kwinkangeleko yamathupha ukuya ekudubuleni, umahluko wobushushu emini/ebusuku uchaphazela ukukhula kwesiqu. Ukuba umahluko usuka ku 0 ukuya kwi 16 degrees celcius, ubude bomthi busuka kwi 14.2 ukuya kwi 27cm.
– ILily sisityalo esithanda ukukhanya okuphakathi, ukukhanya okufanelekileyo ukusuka kwi-12-15 lamawaka lux. Ehlotyeni, i-lily yase-Asia kunye nephunga elimnandi lifuna ukugubungela i-50% yokukhanya, kwaye iqela laseMpuma kufuneka ligubungele i-70% yokukhanya. Ngokwahlukileyo, ukukhula kwindlu yomnatha ebusika, ukukhanya akwanele, i-stamens yamadoda iya kuvelisa i-ethylene, ekhokelela ekuhlahleni kwee-buds. Ngokukodwa i-Asian hybrid group inomdla kakhulu ekunqongopheni kokukhanya, ngoko ke kuyimfuneko ukususa isigqubuthelo somnatha ukunyusa ukukhanya kwendalo kwisityalo.
– Kwizigaba zokuqala zezityalo zidinga amanzi amaninzi, ngexesha leentyantyambo, iimfuno zamanzi ziyancipha ngenxa yokuba iibhubhu ezininzi ziyakwazi ukubola kunye nokulahla amaqabunga. I-Lily ithanda umoya omanzi, obona mswakama ufanelekileyo ngu-80-85%.
– ULily unovelwano kakhulu kwirhasi ye-ethylene, kodwa ukuchaphazeleka kweentlobo kwahluke kakhulu: Iintlobo zaseAsia zinovelwano ngakumbi kwigesi ye-ethylene kunezinye iintlobo.
5. Imvelaphi kunye nentsingiselo yenyibiba
5.1. Imvelaphi yenyibiba
-ILily isasazwe kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela, kubandakanya iMelika, iIndiya, iJapan, iOstreliya, iVietnam kunye neYurophu enkulu. Enyanisweni, inyibiba yenye yezona ntyatyambo zidumileyo eYurophu, yaye iintsapho ezininzi ziyisebenzisela ukuhombisa ikhaya lazo okanye ukuyikhulisa egadini.
– Imigca embalwa yeenyibiba nayo isuka kumazwe aseMpuma anje nge China, Vietnam, kunye ne Korea… Igama elithi Bach Hop flower kuthiwa lavela eTshayina, xa usapho kunye nabahlobo babesandul’ ukutshata. I-bouquet ithwala umnqweno wekhulu leminyaka eligqibeleleyo, elithetha iminyaka eyikhulu yokuvisisana. Ke ngoko, iinyibiba ezimhlophe zihlala zisetyenziswa kwimitshato yaseTshayina.
– Imigca yeenyibiba ehlala ibonakala kwimarike yaseVietnam namhlanje ivela kumazwe aseNtshona. Iibhalbhu zeentyatyambo zisuka ikakhulu eNetherlands, eFransi naseNew Zealand. Iindidi zeentyatyambo zinombala ohlukeneyo kunye nohlobo, ukuhlangabezana neemfuno zeentyatyambo.
– Ngenxa yokuba esi sisityalo esisuka kwimimandla enemozulu epholileyo ethanda imozulu epholileyo, iDa Lat yindawo yokuqala ezama ngayo le ntyatyambo. I-vase yeentyatyambo ezintsha ingagcinwa iintsuku ezi-7-10. Emva koko ngokuthe ngcembe, le ntyatyambo yamkelwa yimarike. Abalimi baseVietnam abanamava asebenzayo baye baphumelela ekwandiseni indawo yokutyala kwiindawo ezinemozulu eshushu ukubonelela ngeedolophu ezinkulu ezifana neHanoi, Saigon…
– Kwindawo ejikeleze iHanoi, sinokukhankanya iilali ezimbalwa zeentyatyambo ezidumileyo kunye nomgca weentyatyambo ezifana nelali yeentyatyambo zaseTay Tuu, ilali yeentyatyambo yaseHa Mo, intyatyambo yeMe Linh, intyatyambo yeSapa… IHoa li ithathwa njengentyatyambo ende. kunezinye iintyatyambo ezifana neerozi, iichrysanthemums, kunye neengqekembe zemali, ezinceda ukuzisa ingeniso ephezulu kubantu abakwezi ndawo zingasentla.
5.2. Intsingiselo yenyibiba
Inyibiba kudala yaziwa ngokuba yintyatyambo ebekekileyo kwaye ebekekileyo, ayibonisi nje ubuhle kunye nokulunga kodwa kunye nekratshi kunye nothando olubekekileyo noluthembekileyo. Ngoko ke, iinyibiba azifanelekanga kuphela oomama kunye nabathandi, kodwa zifanelekile kakhulu ukuvuyisana, ukuphumelela, kunye nokuvulwa okukhulu.
– Inyibiba ineentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo ebomini. Nangona kunjalo, nazi ezinye zeentsingiselo eziphambili ezaziwa kakhulu zenyibiba:
+ Ubunewunewu, ubuhandiba.
+ Uthando lukamama, ukuba ngumama okokuqala.
+ Ubunyulu nobuhle bobutsha.
– ILily inemibala emininzi kwaye umbala ngamnye wale ntyatyambo uneentsingiselo ezahlukeneyo. Nantsi intsingiselo yenyibiba ngokwemibala eyahlukeneyo.
+ Inyibiba emhlophe: ufuzisela ubunyulu nobumsulwa. Ngokukodwa, iMadonna Snow Lily yakhethwa ngumKristu oNgcwele njengentyatyambo emele iNtombi Enyulu uMariya.
+ Inyibiba enemigca epinki: ufuzisela abantu ngamabhongo kunye nenkuthazo xa bejongene nemingeni enzima. Iinyibiba ezipinki zifanelekile ukunika isipho ngomhla wokuvulwa okukhulu okanye usuku lokuphumelela.
+ Inyibiba etyheli: ifuzisela impilo. Idla ngokusetyenziswa njengezipho kubantu abadala okanye abo bagulayo.
+ Inyibiba ebomvu: luphawu lothando nothando. Ngokukodwa kufanelekile ukuhombisa umtshato kunye ne-bouquet yomtshato.
– Umyalezo wenyibiba
“Gcina amandla akho ngamaxesha onke. Izinto ezintsha zihlala zikujikelezile. Ngalo lonke ixesha khumbula, xa ucango olunye luvaliwe, olunye ucango luyavuleka.
Umthombo: Ukudityaniswa kwemithombo emininzi: iphephandaba elongezelelweyo lezolimo; toc.123doc.net – LP
Tìm hiểu về Hoa lưu ly | Hatgiongtihon.net